UManyonga noSemenya bayithemba le-Afrika - Bayede News
UKUBHEKISA amakhanda phansi kwezinsephe zabasubathi bakuleli zigxile kwezikwazi kancono sekuyaqala ukuthela izithelo njengoba abasubathi bakuleli sebeqhathaniswa nezinsephe zomhlaba emidlalweni enhlobonhlobo.
Ukuqokwa kukaCaster Semenya noLuvo Manyonga yinhlangano yomhlaba yabasubathi i-International Association of Athletics Federations (IAAF) phakathi kwezinsephe zomhlaba kuwubufakazi bokuthi ezemidlalo eNingizimu Afrika sezikwelinye izinga. USemenya uphakathi kwabesifazane abayishumi bomhlaba ababanga isicoco se-IAAF Female World Athlete of the Year 2018, kanti uManyonga uqokwe ku-IAAF Male World Athlete of the Year Award. Abaphumelele bazomenyezelwa zizine kuZibandlela emcimbini omkhulukazi ozobanjelwa eMonaco.
UManyonga nguyena owahamba nezindondo eziningi kulong jump emqhudelwaneni iDiamond League nakumaCommonwealth Games, waphinde wakhala wemuka nezindondo zesiliva emqhudelwaneni i-IAAF World Indoor neCAA African Senior Championships. USemenya uqokwe ngamava awakhombisile kulo nyaka nalapho ekwazile ukuvikela irekhodi lakhe ebangeni lama-800 metres okuhlanganisa namaCommonwealth Games, i- African Championships, iDiamond League Final neContinental Cup.
USemenya uyena ophethe isicoco sebanga le-1 500m kumaCommonwealth Games nele 400 metres African Champion. Abaqokwe kulo mklomelo omkhulu emhlabeni bahlonzwe ithimba labayisithupha elisezingeni eliphezulu labasubathi emhlabeni eliqhamuka kumazwekazi ayisithupha e-IAAF. Inhlangano yezokusubatha kuleli i-Athletics South Africa (ASA) ngomlomo kaMengameli wayo u-Aleck Skhosana isinxuse abantu baseNingizimu Afrika ukuba beseke lezi zingwazi, zinikwe ukuhlonishwa ezikufanele.
“Sinxusa bonke abantu bakuleli nabasemazweni angomakhelwane ukuba baseseke ngoba laba abaqokiwe basebenze ngokuzikhandla. Isikhathi sokuvota sesifikile siyaninxusa ukuba nivotele uSemenya noManyonga,” kusho uSkhosana.
Uthi bayaziqhenya ngokuqokwa kwalezi zingwazi ngoba kukhona nabanye abenza kahle kodwa abaze baphonse amateku ethala bengazange bakuthole ukuhlonishwa okukuleli zinga. Ukuvota kuzovalwa ngasekupheleni kukaLwezi. Laba baqokwa emhlabeni nje baphinde baqokwa nakuleli kuma-13th SA Sports Awards.
USemenya uncintisana noKagiso Rabada wekhilikithi noHekkie Budler ongumshayisibhakela kuSA Sports Star of the Year Award. UManyonga uqokwe kuSportsman of the Year ubanga noChad le Clos, noHekkie Budler.
Le miklomelo ihlukene ngemikhakha eli-19 kubhekwa labo abenze kahle phakathi kukaMandulo wezi-2017 noNcwaba 31 wezi-2018.
Bayede News Oct 25, 2018